ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး'
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ဆိုတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလွယ်တကူဆော့ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို MyTelenor အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှာ စုစည်းပေးထားတဲ့ Game Portal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများ၊ အကောင်းဆုံးရမှတ်ဖော်ပြမှုများသာမက လက်ငင်းဆုလက်ဆောင်တွေပါ ရရှိနိုင်သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝင်ရောက်ဆော့ကစားရင်း ဆုလက်ဆောင်တွေပါ ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားပေါင်း ငါးမျိုးထဲကမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတွေကတော့ Action ဂိမ်း၊ Arcade ပုံစံ၊ စွန့်စားခန်းများ၊ စဉ်းစားအဖြေရှာပဟေဠိအမျိုးအစားများနဲ့ အားကစားနဲ့ကားပြိုင်ဂိမ်းအမျိုးအစားများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဂိမ်းများစွာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
တယ်လီနောဆင်းကတ် အသုံးပြုပြီး MyTelenor App ကို Install ပြုလုပ် အသုံးပြုနေသူများအတွက် အထူးသီးသန့်
ဂိမ်းတွေဆော့ ဆုလက်ဆောင်ဖုန်းဘေတွေ ပြန်လည်ရယူ
သင့်ရဲ့ Smartphone မှတဆင့် Wifi သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖွင့်ထားချိန် MyTelenor App မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ဒေတာခကျသင့်မှု ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ကို Subscribe ပြုလုပ် ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ကြေးအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် ‘ဂိမ်းတိုကင်’ တွေ ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိလာတဲ့ ဂိမ်းတိုကင်တွေကို အသုံးပြု၊ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း ပြိုင်ပွဲအလိုက် ဆုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုကင်ဆု သို့မဟုတ် တယ်လီနောဖုန်းဘေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထိကို နေ့စဉ် အနိုင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရင်း ထိပ်ဆုံး ၁၀ စာရင်းထဲ ရောက်ရှိလာသည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် တယ်လီနောဖုန်းငွေများကို ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို အောက်ဘက်ရှိ အမေးများသောမေးခွန်းများ နေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရဲ့ အခမဲ့ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းသုံးမျိုးအတွက်တော့ ဘာကိုမှ Subscribe ပြုလုပ်ရယူထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ရဲ့ အခြား ဂိမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဝန်ဆောင်ခအနေနဲ့ ၇ရက်စာအတွက် ၅၀၀ ကျပ် (အခွန်ပါပြီး) သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကို MyTelenor App ရဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Game Portal နေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
(တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုအတွက် အပတ်စဉ် အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။)
Subscribe - 500 MMK 1,000 ဂိမ်းတိုကင်
ပထမအပတ် သက်တမ်းတိုးခြင်း 1,200 ဂိမ်းတိုကင်
ဒုတိယအပတ် သက်တမ်းတိုးခြင်း 1,500 ဂိမ်းတိုကင်
တတိယအပတ် သက်တမ်းတိုးခြင်း 2,000 ဂိမ်းတိုကင်
စတုတ္ထအပတ်နှင့် ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် 2,500 ဂိမ်းတိုကင်
ဂိမ်းတိုကင် သက်တမ်း - ၇ရက်သက်တမ်းရှိပြီး ထပ်မံ ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့်အခါ လက်ကျန်ဂိမ်းတိုကင်များကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Unsubscribe ပြုလုပ်ချင်ရင်လည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပဲ 75457 ကို OFF GPL ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ဆိုတာ ဘာလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ဆိုတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလွယ်တကူဆော့ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို MyTelenor အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှာ စုစည်းပေးထားတဲ့ Game Portal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများ၊ အကောင်းဆုံးရမှတ်ဖော်ပြမှုများသာမက လက်ငင်းဆုလက်ဆောင်တွေပါ ရရှိနိုင်သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝင်ရောက်ဆော့ကစားရင်း ဆုလက်ဆောင်တွေပါ ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ကို ဘယ်လို ရယူဆော့ကစားနိုင်မလဲ?
သင့်ရဲ့ Smartphone မှတဆင့် Wifi သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖွင့်ထားချိန် MyTelenor App မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောဆင်းကတ် အသုံးပြုပြီး MyTelenor App ကို Install ပြုလုပ် အသုံးပြုနေသူများအတွက် အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor App ကိုတော့ ဒီမှာ နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ ဘယ်လို ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ ကစားနိုင်ပါသလဲ?
ဂိမ်းအမျိုးအစားပေါင်း ငါးမျိုးထဲကမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတွေကတော့ Action ဂိမ်း၊ Arcade ပုံစံ၊ စွန့်စားခန်းများ၊ စဉ်းစားအဖြေရှာပဟေဠိအမျိုးအစားများနဲ့ အားကစားနဲ့ကားပြိုင်ဂိမ်းအမျိုးအစားများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဂိမ်းများစွာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဂိမ်းတွေကစားဖို့ ဘာတွေကို Subscribe ပြုလုပ်ရယူဖို့လိုပါသလဲ?
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရဲ့ အခမဲ့ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းသုံးမျိုးအတွက်တော့ ဘာကိုမှ Subscribe ပြုလုပ်ရယူထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများမှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူဖို့ဆိုရင်တော့ Subscribe ပြုလုပ်ရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Subscribe ပြုလုပ်ခြင်း သေချာပြီးချိန်မှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျသင့်ငွေကို သင့်ရဲ့ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Subscription အောင်မြင်ပြီးချိန်မှာတော့ ဂိမ်းပေါင်းများစွာ ကစားရင်း ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ အတွက် ဝန်ဆောင်ခက ဘယ်လောက် ကျသင့်မှာပါလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ရဲ့ ဂိမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်ခအနေနဲ့ ၇ရက်စာအတွက် ၅၀၀ ကျပ် (အခွန်ပါပြီး) သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုအတွက် အပတ်စဉ် အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို Unsubscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါမလဲ?
လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပဲ ‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ စာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Icon လေးကို နှိပ်ပြီး Unsubscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် 75457 ကို OFF GPL ဟု စာတိုပေးပို့ပြီးလည်း ရန်တန့်နိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ကစားဖို့ အပိုထပ်ဆောင်းပေးရတာမျိုး ရှိပါသေးလား?
မရှိပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်ဟာ Subscribe ပြုလုပ်ရယူခြင်းအတွက် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြိုင်ပွဲမကစားမီ လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ရေးဇုံအတွက်လည်း ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ ဝင်ရောက်ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ ဒေတာကုန်ကျမှု ရှိပါသလား?
မရှိပါဘူး။ ‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ဒေတာခကျသင့်မှု ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေကို ဘယ်လိုပါဝင်ကစားလို့ ရမလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ထဲမှာ ‘ဆုတွေရယူလိုက်ပါ’ ၊ ‘လေ့ကျင့်ရေးဇုံ’ နဲ့ ‘ကိုယ်ပိုင်အကောင့်’ ဆိုပြီး နေရာ ၃ နေရာရှိပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက် ‘ဆုတွေရယူလိုက်ပါ’ ဆိုတဲ့နေရာကို သွားရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲရှိနေတဲ့ဂိမ်းကို ရွေးချယ်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကစားဖို့ ဝင်ကြေးအနေနဲ့ ‘ဂိမ်းတိုကင်’ ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး အချို့သော ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများတွင်အနိုင်ရရှိခြင်းအတွက် ‘တိုကင်ဆု’ ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်နှကြိမ် ကစားနိုင်မှာပါလဲ?
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် ဝင်ကြေးအဖြစ် ဂိမ်းတိုကင် အသုံးပြုပြီးပါက ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်း အကန့်အသတ်မရှိ ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာတော့ စတင်ချိန်နဲ့ ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန်ကိုတော့ သတ်မှတ်ဖေါ်ပြထားရှိပါတယ်။
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဘယ်နှခုမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာပါလဲ?
‘ဆုတွေရယူလိုက်ပါ’ ဆိုတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ မည်သည့် ပြိုင်ပွဲကိုမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လို့ရပါတယ်။ ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ‘ဂိမ်းတိုကင်’ (၀ ၊ ၅၀ ၊ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ ၊ ၃၀၀ စသည်) ကို ဝင်ကြေးအဖြစ် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းတိုကင်’ နဲ့ ‘တိုကင်ဆု’ ဆိုတာ ဘာတွေပါလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ကို Subscribe ပြုလုပ် ဝန်ဆောင်မှု ရယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ‘ဆုတွေယူလိုက်ပါ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ကြေးအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် ‘ဂိမ်းတိုကင်’ တွေ ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘တိုကင်ဆု’ ဆိုတာကတော့ ဦးဆောင်အမှတ်အနေနဲ့ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အခါ ပေးမယ့် ဆုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‘တိုကင်ဆု’ တွေကို ‘ကိုယ်ပိုင်အကောင့်’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သွားရောက်ရယူနိုင်ပြီး ‘ဂိမ်းတိုကင်’ တွေအဖြစ် အခြားသော ပြိုင်ပွဲများမှာ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်လို့ရအောင် လဲလှယ်သွားလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခြားသော ဆုလက်ဆောင်တွေအဖြစ်လည်း လဲလှယ်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ကိုယ်ပိုင်အကောင့်’ ထဲမှာရှိတဲ့ ‘တိုကင်ဆု’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သွားရောက်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
လက်ကျန် ‘ဂိမ်းတိုကင်’ နဲ့ ‘တိုကင်ဆု’ တွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ‘ဂိမ်းတိုကင်’ နဲ့ ‘တိုကင်ဆု’ များကို ‘ဆုတွေရယူလိုက်ပါ’ ဆိုတဲ့နေရာရဲ့ အပေါ်ဘက်လေးမှာ စစ်ဆေးနိုင်သလို ‘ကိုယ်ပိုင်အကောင့်’ ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုကို Subscribe ပြုလုပ်ရယူပြီးတာနဲ့ ‘ဂိမ်းတိုကင်’ ရော ‘တိုကင်ဆု’ ကိုရော ရမှာပါလား?
ဝန်ဆောင်မှုကို အောင်မြင်စွာရယူပြီးတာနဲ့ ‘ဂိမ်းတိုကင်’ တွေကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘တိုကင်ဆု’ ကိုတော့ ပြိုင်ပွဲများမှာ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရရှိမှသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စတုတအပတ်နှင့် ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် 2,500 ဂိမ်းတိုကင်
‘ဦးဆောင်အမှတ်များ’ ဆိုတာ ဘာပါလဲ၊ မိမိရဲ့ အမှတ်ကို ဘယ်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာပါလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ရဲ့ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီတိုင်းမှာ သီးသန့် ‘ဦးဆောင်အမှတ်များ’ အဖြစ် ထားရှိထားပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဂိမ်းတစ်ခုကို ကစားသည့်အခါတိုင်း သင့်ရမှတ်ကို System ကနေ မှတ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားကစားခြင်းကနေ ရရှိလာတဲ့ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးရမှတ်ကို ‘ဦးဆောင်အမှတ်များ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဆင့်နဲ့အတူ ပြသပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဦးဆောင်အမှတ်များ’ နေရာမှာရှိတဲ့ ဆုတံဆိပ်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး မိမိရဲ့ ရမှတ်နဲ့ အဆင့်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သလို ဂိမ်းစာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ ဆုတံဆိပ်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာပါလဲ?
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း မိမိရဲ့ ရမှတ်နဲ့ အဆင့်ကို ပြိုင်ပွဲရဲ့ ‘ဦးဆောင်ရမှတ်များ’ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲပြီးသွားချိန်မှာတော့ ယင်းနေရာမှတဆင့် မြင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲ ‘ကိုယ်ပိုင်အကောင့်’ အောက်ရှိ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲနေရာမှာလည်းကောင်း ညဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ ဆုတံဆိပ်ပုံမှတဆင့်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
‘လေ့ကျင့်ရေးဇုံ’ ဆိုတာ ဘာပါလဲ?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ ရဲ့ ‘လေ့ကျင့်ရေးဇုံ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ ဂိမ်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာ (Action ဂိမ်း၊ Arcade ပုံစံ၊ စွန့်စားခန်းများ၊ စဉ်းစားအဖြေရှာပဟေဠိအမျိုးအစားများနဲ့ အားကစားနဲ့ကားပြိုင်ဂိမ်း စသည်) တို့ကို လေ့ကျင့်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဝင်ကြေးအဖြစ် ဂိမ်းတိုကင်ပေးစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဝန်ဆောင်မှုကို Subscribe ပြုလုပ်ရယူပြီးတာနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးဇုံမှာ စိတ်ကြိုက်အားလုံး ကစားလို့ရပါတယ်။
လေ့ကျင့်ရေးဇုံ’ မှာရော ‘ဦးဆောင်ရမှတ်များ’ ဆိုပြီး ထားရှိပါသေးလား?
‘လေ့ကျင့်ရေးဇုံ’ မှာတော့ ဦးဆောင်ရမှတ် သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာက သင့်အတွက် လေ့ကျင့်ကစားပြီး မိမိရဲ့ ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ သွားရောက်မယှဉ်ပြိုင်မီ မြှင့်တင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘Spin & Win’ ဆိုတာကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမှာပါလဲ? အဲ့ကနေ ဘာတိုကင် အမျိုးအစား ရရှိနိုင်မှာပါလဲ?
တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် Spin & Win မှာ လှည့်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ပထမဆုံး ဂိမ်းထဲဝင်ရောက်စဉ်မှာ အလိုအလျှောက် ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် လှည့်ရန် ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလှည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျော်ရန်ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။ လှည့်ခွင့်ကို ရယူခဲ့ရင်တော့ ဂိမ်းတိုကင်များကို ကျပန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို ကျော်ထားခဲ့ရင်တော့ ယင်းရက်အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် ဂိမ်းထဲဝင်ရောက်သည့်အခါ လှည့်ခွင့်ကို ရနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ မိမိရဲ့ Profile ပုံ သို့မဟုတ် Avatar ကို ပြင်ဆင်လို့ရပါသလား?
‘ပေါ့ပေါ့ပါးပါး’ မှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Avatar ပုံတွေကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ‘အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပြင်ရန်’ ဆိုတာကိုနှိပ်၊ ရွေးချယ်စရာ Avatar ပုံများကို မိမိစိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။
ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကနေ ဘယ်လိုဆုလက်ဆောင်တွေ ရရှိနိုင်ပါသလဲ?
ဆုလက်ဆောင်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရရှိနိုင်မှာပါလဲ ?
တယ်လီနောဖုန်းငွေလက်ဆောင်ကို နေ့စဉ် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအချိန်ကိုတော့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ချိန်ကို ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဘေးနားမှာ ဖော်ပြထားရှိပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန် ‘ဦးဆောင်ရမှတ်များ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ထိပ်ဆုံး ၁၀ယောက်ထဲ ရောက်ရှိခဲ့လျှင် ဂုဏ်ယူကြောင်း စာတိုကို ပေးပို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစာတိုရရှိပြီးသည်နှင့် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေကိုလည်း သတ်မှတ် အဆင့်အလိုက် ၁၀ မိနစ်အတွင်း ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုခု ဆက်သွယ်မေးမြန်းချင်ရင် ဘယ်ကို ဆက်သွယ်လို့ရမလဲ?
တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ Call Center နံပါတ် ၉၇၉ သို့မဟုတ် Telenor Myanmar official Facebook page တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။